Saturday July 11, 2020 - 16:10:39 in Maqaallo by Wariye Khaliil Barre
WALI MA ISWEYDIISAY SABABTA KEENTAY IN ADUUNKU INDHAHA KU HAYO AFRICA IYO GOBOLKA GEESKA AFRICA ?
Waa su'aal qofkasta oo la socda xaaladaha siyaasadeed ee Gobolka Geeska Africa iyo Guud ahaan siyaasada aduunkuba isweydiinayo ?
Qaarada Africa guud ahaan waa qaarad ka ka kooban shan gobol oo kala ah Afrikada Bari , Afrikada waqooyi Afrikada Galbeed , Afrikada koonfureed iyo Afrikada dhexe , shanta gobol ee Afrika dhamaantood waa qaar leh muhiimado waaweyn oo qaarada Afrika iyo aduunkuba aanu ka maarmin.
Qaarada Africa waa qaarad guud ahaan dihin oo khayraadkeedu wali aan la fur-furin oo uu duuban yahay amaba u aasan yahay , siyaasada aduunka ka socotaa guud ahaan laba waxa ay ka kooban tahay oo lagu tartamayaa sadex shay oo kala ah 1- Dhaqaale 2- Awood 3- Gudbin aragti iyo mabaadii oo uu dalwaliba xulafo ku raadinayo.
Dhinaca kale waxa Africa hore u soo maray oo ilaa maanta saameyn siyaasadeed nololeed , cilmiyeedba ku leh dawladaha reer Yurub oo inta badan aanu marnaba ka qoob qaadin ilaa 1884 kii markii qaarada Africa ay Berlin ku qaybsadeen in ay guneystaan , waxa isaguna jira dawlada maraykanka oo ah quwada aduunka ee hadda oo aanay siyaasad ahaan kala fogeyn reer yurub oo leh xulfi siyaasadeed oo Bariga dhexe iyo aduunka guud ahaan wadamo badan ku leh.
Qaarada Africa waa qaarada sidaasi loo danaynayo ee ahmiyada intaa leeg ku leh aduunka oo maanta xiliga la joogo loo wada baahan yahay, waa xiligii ay Africa iyaduna ku biiri lahayd quwadaha aduunka hadii ay wax badan ka xorowdo wax badana ku midoobi karto.
3- Waa Gobol u ah albaab Africa laga gallo oo aad loo wada danaynayo in dalwaliba badiisa iyo barigiisa yimaado oo uu ka sameysato xarun .
3- Siyaasada Bariga dhexe iyo wadamada khaleejka oo saameyn xoogan ku yeelatay arimaha siyaasadeed iyo hogaamineed gobolkani iyo waliba wadamada Turkey iyo dawlado badan oo kale oo ku cusub oo iyaguna raba in ay gobolkani gacanta ku dhigaan .
3- Africa in ay abuurto walaalnimadii iyo wadaniyadii isjacaylka Africa ee xiligii gobanimo doonka jirtay , oo wax badan la fududeeyo isla markaana go'aanada midowga Africa iyo hawshooda la dardar galiyo iyada oo lagu soo bislaynayo urur goboleedyada qaarada.
4- Africa waxa ay u baahan tahay hogaamiyeyaal hami fog iyo himilo sare leh oo ay ku dheer tahay in ay qaaradani noqoto mid aduunka hogaamisa kana baxda dib u dhaca , dagaalada , faqriga , gaajada iyo horumar la'aanta oo ka midho dhaliya fursadaha .
Waxa aduunka la isla yaqaanaa in marba meel aduunku ku ururo oo lagu tartamo imika waxa la saadaalinayaa qarnigan socda in Africa aduunka oo dhami dabaynayo meelaha ugu mudan ee la wada rabo waxa ka mid ah Gobolka Geeska Africa iyo Marin biyoodka aduunka u muhiimka ah ee Badda Cas oo labadaasiba ay Somaliland tahay dalka ugu haboon albaabka u ah Gobolka Geeska Africa, Isla markaana Badda cas ay tahay dalka ugu dheer ee xuduud la leh 900 km ku dhow.
Hogaamiyaha UrurkaDadweynaha Somaliland